Multnomah County Voters Make Decisions - Somali | Multnomah County
Multnomah County Voters Make Decisions - Somali
Arbaco, Maajo 19, 2021
Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah Waxay Go'aanno Ka Gaaraan In ka badan 100 Tartamada Degmada Gaar ah iyo Hindise Sharciyeedyada Warqadda Cod-bixinta ee loogu talagalay Doorashada Degmada Gaarka ah ee Bisha Maayo 18, 2021 — Xubnaha Kooxda Gaarka ah waxay ka caawinayaan Hubinta in Cod Kasta La Xisaabiyo
Xiriirrada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-8683
Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah Waxay Go'aanno Ka Gaaraan In ka badan 100 Tartamada Degmada Gaar ah iyo Hindise Sharciyeedyada Warqada Cod-bixinta
Markay tahay 8 p.m. Maalinta Doorashada, Talaado, Maajo 18, dadka u soo baxay waxay gaareen 22.34 boqolkiiba iyada oo 126,086 warqadaha codbixinta ah la dhiibtay, maaddaama cod-bixiyeyaashu ay go'aansadeen in ka badan 100 tartamada degmada gaarka ah iyo hal hindise sharciyeed oo gobolka oo dhan ah. Tartamada gaarka ah iyo hindise sharciyeedyada ee ku qoran warqada codbixinta ee shaqsiyeed waxay ku xirantahay degmooyinka iyo awoodaha maxkamadeed ee uu qofka ku noolyahay.
Doorashooyinka Dawlada Hoose Waa la Tixgeliyaa!
Doorashooyinka dawlada hoose waa muhiim waxaana si weyn loogu xisaabiyaa go'aan qaadashada lagu dhiso mustaqbalka bulshooyinkeena. Waad ku mahadsan tihiin kumannaanka codbixiyeyaasha ee Degmadda Multnomah ee ka qaybqaatay oo hubiyey in codkooda lagaga dhageystay doorashada degmada gaarka ah.
Cod-bixiyeyaashu waxay mar kale isku diiwaangeliyeen oo ay ka heleen ogaysiisyada la socoshada warqadda iyo wararka adeegga caanka ah Lasoco Warqadaada Codayntaee Degmada Multnomah. Ogeeysiisyada qoraalka, iimaylka, ama codka ah ee ku qoran Ingiriis, Isbaanish, Fiitnaam, ama Shiineys waxay u oggolaadaan cod-bixiyeyaasha Degmadda Multnomah inay ogaadaan goorta boostada loogu diro warqadooda cod-bixinta, iyo kadib markay codeeyaanna oo ay soo celiyaan, goorta warqadooda cod-bixinta loo aqbalo in la xisaabiyo. Ku dhowaad 30-boqolkiiba cod-bixiyeyaasha u-qalma ayaa horeyba u furtay adeegan muhiimka ah! Ka furo kahor doorashada xigta bartamultnomah.ballottrax.net.
Qabashada Doorasho waa Dadaal Kooxeed
Qabashada doorashada waa dadaal kooxeed, waxaana loo baahan yahay koox shaqaala ah oo dadaal badan inay ka caawiyaan codbixiyeyaasha isla markaana ilaaliyaan warqadaha codbixinta laga bilaabo boosta ku dirsta, hubinta in codbixiyayaashu ay codkooda ritaan ugu dambayntiina ay soo celiyaan si loo xisaabiyo. Talaabo kasta oo loo maro wadada warqadda codbixinta waxaa ku lug leh shaqaalaha doorashada. Mar labaad, shaqaalahan doorashada ayaa sii wadaya inay ku dhex shaqeeyaan xaalada safmarka.
Lee Neils waa shaqaale ka shaqeysa warqadaha codbixinta. Waxay u shaqeysaa iyada oo qayb ka ah koox ka kooban labo shaqaalaha doorasho ah oo la dhaariyey kuwaas oo ka soo qaada warqadaha codbixinta 30-ka goobood ee Goobaha Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah ee Degmada Multnomah ka dibna dib ugu soo celiya warqadaha codbixinta Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah. Waxay u shaqeyneysay shaqaale doorasho laga soo bilaabo 2006.
“Shaqadayda waan jeclahay. Waxaan ka qeybqaadanayaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee codbixinta,” ayay tiri. “Waxaan jecelahay inaan kula kulmo dadka meel fagaare ah; aniga oo ka jawaabaya su'aalaha ku saabsan codbixinta oo dareensiinayo in loo mahadceliyo.”
Kristen Mun waxay ka shaqeyneysaa doorashadeedii labaad Gobolka Multnomah. Waxay qaadaa warqadaha codbixinta ee laga helay Goobta Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah ama ku jira boostada waxayna marisaa mashiinka kala sooca ah ee kujira Qolka Buluugga ah ee Dhismaha Doorashada Degmada Duniway-Lovejoy ee Multnomah. Mashiinka kala sooca wuxuu kala soocaa warqadaha codbixinta wuxuuna sawirka ka qaadaa saxiixaaga ku yaala baqshadda warqadda doorashada.
"Waxaan xiiseynayay sida wax walba u shaqeeyaan," ayay tiri Mun. "Waan jeclahay shaqadan maxaa yeelay marko koowaad waxaan wax ka bartay safarka warqada codbixnta, tan labaadna runtii waxaan jeclahay dadka ka shaqeeya Doorashooyinka. Waxay si dhab ah u ilaaliyaan hannaanka doorashada si ka wayn
wax walba. ”
Tom Urbanowicz wuxuu la shaqeeyaa miisaska soo saarista warqadda codbixinta. Wuxuu hubiyaa baakadaha warqadaha codbixinta la kala soocay wuxuuna u diyaariyaa si loo furo. Wuxuu sidoo kale u qabtaa shaqooyin kale Doorashooyinka. Wuxuu boosto ugu diray warqadaha codbixinta codbixiyaasha dibada, wuxuu diyaariyaa warqadaha baddelka ah, wuxuuna qaadaa warqadaha lagu soo codeeyay ee lagu celiyay xafiiska boostada subax kasta. Tani waa doorashadiisii lixaad.
“Waxaan dhigi jiray cilmiga bulshada 31 sano, waxaan wax ka dhigay hannaanka codeynta waxaana caruurta ku dhiirigelin jiray inay codeeyaan. Ka dib markii aan ka fariistay shaqada macallinnimada, waxaan ka shaqa bilaabay halkan runtiina aad ayaan uga helay. Xitaa waxaan tusay mida timaha ii hagaajiso sida loo codeeyo, ”ayuu yiri. “Sanduuqeeda Codbixinta Rasmiga ah wuxuu ku dhawaa saloonka.”
Delores Terry waxay ka jawaabtaa wicitaanada taleefonka waxayna ku caawisaa codbixiyaasha warbixinta in kabadan 10 sano. Markaad wacdo khadkeena tooska ah ee doorashooyinka 503-988-8683, waxaad u badan tahay inaad ka maqasho codka dhiirrigelinta leh ee Terry dhinaca kale.
“Waxaan ka helaa inaan la hadlo codbixiyeyaasha, oo aan caawiyo. Waxaan wax badan ka bartay nafsad ahaanteyda hannaanka doorashada, wayna wanaagsan tahay in la awoodo in midaas lala wadaago dadka na soo wacaaan, ”ayuu yiri Terry.
Susy Kristin waxay ka shaqeysaa Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah waxay ku taal 600 NE 8th Street ee magaalada hoose ee Gresham. Iyadu sidoo kale waxay ka mid tahay kooxda Waxbarasta iyo Wacyigelinta Cod-bixiyaha. Waxay shaqada ku bilaawday shaqaale doorasho ahaan 2016. Susy waxay ka caawisaa codbixiyeyaasha ku hadla Isbaanishka inay fahmaan muhiimada doorashada iyadoo loo marayo tarjumaada, caawinta cod bixiyaha, waxbarisa cod bixiyaha, iyo wacyigalinta.
“Markii aan shaqada ka bilaabay halkan waxaan runtii dareemay inay muhiim tahay in dadka laga caawiyo inay fahmaan sida doorashadu u shaqeyso iyo sida loo codeeyo. Waxaan jeclahay inaan u adeego bulshada Latino.” Kristin ayaa la wadaagay.
Laanta Doorashooyinka waxaa u shaqeeya ilaa 300 oo ah shaqaalaha doorashada ee heeganka ah si ay ugu biiraan shaqaalaha joogtada ah si loo qabto doorasho kasta. Mid kasta oo ka mid ah shaqaalaha doorashada wuxuu u adeegaa sida qeyb ka mid ah ujeedada weyn ee ah in la qabto doorasho sax ah, la heli karo, oo ammaan ah oo loogu talagalay cod-bixiyaasha Degmada Multnomah.
Natiijooyinka Rasmiga ah ee Kama Danbeysta ah ee Doorashada La Heli Karo Juun 7, 2021
Natiijooyinka rasmiga ah ee kama danbeysta ah ee doorashada waa la cadeyn doonaa waxaana loo gudbin doonaa degmooyinka gaarka ah Juun 7, 2021. Ugu yaraan 50 ilaa 60 boqolkiiba wadarta codadka la dhiibtay doorashada waxaa la soo gudbiyaa 8 p.m. Habeenkii Doorashada ee Degmada Multnomah. Ka shaqeynta warqadda codbixinta ayaa sii socon doonta maanta, iyadoo natiijooyinka si joogto ah loogu cusbooneysiin doono mcelections.org.
Doorashada xigta ee u qorshaysan Degmada Multnomah waa Doorashada Koowaad ee Maajo 17, 2022.
Xidhan - Waxaan sannadka dambe kugu arki doonnaa Doorashada Koowaad ee Maajo 17, 2022.